Ungayisusa kanjani i-watermark esithombeni nalezi zinhlelo | Izindaba zamagajethi
UPaco L Gutierrez | 28/01/2021 11:36 | Kubuyekezwe ku- 28/01/2021 12:37 | General
I-Inthanethi igcwele izithombe, vele uye kwaGoogle ukuthola izithombe cishe noma yini esiyifunayo, konke mahhala. Kepha ezinye zezinto esizibona ku-inthanethi zinomnikazi wazo, esimweni sezithombe Kulula ukubona lapho umnikazi eyithatha njengeyakhe, ngoba leso sithombe ngokuvamile siba nomkhiqizo. Lezi zimaki zivame ukuba wuphawu oluncane ekhoneni umhleli wesithombe akwenze kucace futhi kungaphazamisi, kusale okuqukethwe njenge-protagonist.
Lokhu akwenzeki ngaso sonke isikhathi, kwesinye isikhathi singathola le logo ifiphalisiwe kuso sonke isithombe, esele ngemuva kodwa icace bha. Kungumkhuba ovamile uma sicabanga ukuthi lesi sithombe akufanele sisetshenziswe ngomunye umuntu. Yinto okufanele ihlonishwe ngoba ikhombisa ukuthi umbhali wayo ngeke ajabule kakhulu ukubona isithombe sishicilelwa ngomunye. Kwesinye isikhathi yizinhlelo zokuhlela ngokwazo noma nokusetshenziswa kwekhamera kweminye imisipha eshiya i-watermark yayo, singayisusa kalula ngezinhlelo ezithile noma ngezinhlelo zokusebenza zewebhu. Kulesi sihloko sizobonisa ukuthi ungayikhipha kanjani i-watermark esithombeni.
1 Kusemthethweni yini ukususa i-watermark esithombeni?
2 Isikhiphi seWatermark
3 Isisusa Isitembu Sezithombe
Kusemthethweni yini ukususa i-watermark esithombeni?
Uma isithombe siyimpahla yakho futhi umane ufuna ukususa i-watermark efakwe uhlelo noma uhlelo lwekhamera, kusemthethweni ngokuphelele. Lawa ma-watermark asetshenziswa ngabathuthukisi balezi zinhlelo zokusebenza ngandlela thile ukweqa ukukhangisa okucashile kusithombe ngasinye sethu, okuthile okungahambisani nobuhle nokungathandeki. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi iningi lalawa ma-watermark angasuswa ngokumane abuze kuzilungiselelo zalezo zinhlelo zokusebenza.
Ngakolunye uhlangothi, isithombe sivela kwi-intanethi futhi i-watermark ivela kokuphakathi noma komuntu, singayisusa leyo watermark uma esikufunayo ukusebenzisa leso sithombe ngendlela yomuntu siqu, kodwa uma lokho esikufunayo kungukuzuza ngokuyisebenzisa, uma singaba nezinkinga zomthetho, uma umbhali efisa kanjalo. Njengoba ukuthatha isithombe nokuhlelwa kwaso okulandelayo kungumsebenzi okungewona wonke umuntu ofuna ukukunika.
Uma sesixwayisiwe ngemiphumela yezomthetho engaba khona, sizobona ukuthi yiziphi izinhlelo okufanele sizisebenzise noma yimaphi amawebhusayithi okufanele siwasebenzise ukuqeda lawo ma-watermark acasulayo futhi angabukeki athi, yize ehlakaniphile, onakalise isithombe esihle.
Uhlelo oluhle lwalo msebenzi, ngaphandle kokungabaza yiWatermark Remover. Inawo wonke amathuluzi adingekayo okusula noma ukufiphaza zonke izinto zobuciko esizifunayo emfanekisweni, kusukela kuma-watermark kuya kokungapheleli esingafuni ukukubona. Futhi kwenziwa ngendlela elula kakhulu, ngakho-ke akudingekile ukuthi ube nolwazi oluthuthukile mayelana nokuhlelwa kwezithombe noma izinhlelo.
Lolu hlelo lumahhala futhi aludingi ukufakwa, simane singene kuwebhu bese siqala, nayi eminye imiyalo yokuthi ungakwenza kanjani:
Sivula isithombe ngohlelo ku "Ama-watermark wesithombe".
Simaka indawo lapho lo mkhiqizo utholakala khona noma i-artifact esifuna ukuyisusa.
Sithola bese uchofoza kukho "Jikela ku"
Ilungile, sizosuswa i-watermark yethu.
Isisusa Isitembu Sezithombe
Olunye uhlelo oluhle kakhulu lalo msebenzi ngokungangabazeki i-Photo Stamp Remover, uhlelo olulula ukulusebenzisa noma singenawo amakhono kakhulu ngekhompyutha. Lolu hlelo lwenzelwe lo msebenzi ngokukhethekile, ngakho-ke amathuluzi esiwatholayo okususa ama-watermark ahlukahlukene kakhulu futhi ayasebenza. Ngokungafani nesicelo sangaphambilini, lokhu kufanele kufakwe kukhompyutha yethu, ngakho-ke kuzofanela sikulande ngaphambilini. Sizonikeza imininingwane yokuthi siyisusa kanjani i-watermark ngezinyathelo ezimbalwa ezilula:
Sivula uhlelo bese sichofoza ku- «Faka ifayili» ukukhetha isithombe esifuna ukusihlela.
Lapho isithombe silayishiwe, siya kuphaneli elungile lesicelo bese uchofoza kukho "Unxande" esigabeni samathuluzi.
Manje ngedwa kufanele sikhethe indawo lapho i-watermark itholakala khona ukuthi sifuna ukuqeda futhi kuzokwakhiwa unxande oguqukayo ozungeze umbala obomvu, kufanele kuqashelwe ukuthi lapho leli bhokisi liqina ngokwengeziwe, umphumela uzoba ngcono.
Chofoza kukho "Ukususwa kwemodi" bese uchofoza kukho "Ukupenda" yemenyu esizoyibona ikhonjisiwe.
Manje nje kufanele chofoza kukho "Govuza" futhi i-watermark izosuswa ngokuphelele, kuqedwe uhlelo.
Ekugcineni ukusindisa isithombe, chofoza ku- «Save as», inketho ebitholakala kumenyu enkulu yohlelo lokusebenza.
Njengoba sikwazi ukubona, ukususa i-watermark esithombeni kulula kakhulu futhi akudingi izinhlelo zokuhlela eziyinkimbinkimbi, Uma uneziphakamiso ngezinye izindlela zokufeza lo msebenzi, sizojabula ukuzithola ngemibono.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ungayisusa kanjani i-watermark esithombeni nalezi zinhlelo